चिल्ला भए सडक
बुधबार गौशाला–पुरानो बानेश्वर सडक कालोपत्रे गरिंदै । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ गते देखि नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने भएका कारण मोदी बस्ने होटल द्वारिका आसपासका सडक धमाधम कालोपत्रे गरिएका छन् । सरकारले कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिंदै उपत्यकामा सरसफाइ अभियान पनि चलाएको
पुल भत्कियो सरकार !!!
सुर्खेतको मुलपानी नगरपालिका–२ देखि फलाटेसम्म जाने रोड अन्तर्गत भुरेली खोला जीर्ण अवस्थाको पुल । यो पुल सर्वसाधारण आवत–जावत गर्न पासो बनेको छ । तैपनि पुल मर्मत गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखले कुनै चासो दिएका छैनन् । पुलमा विभिन्न सवारी दुर्घटना समेत भइसकेका छन् । चुनावको बेला ठुलठुला सपना बाड्ने नेताहरुको
२५ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१८ को अवसरमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यसै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले प्रभातफेरि गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गरौँ, स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको खम्बा हो जस्ता नारा पत्रकारहरूले लगाएका थिए । महासंघको
काठमाडौँको भृकुटी मण्डपस्थित १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवको प्रदर्शनीमा राखिएका सामग्रीको अवलोकन गर्दै अवलोकनकर्ता । तस्बिर: रमेश दवाडी/अमरवाणी
राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राज्यलाई खबरदारी !
काठमाडौँ । राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले राष्ट्रिय झण्डासहित राजधानीमा ¥याली निकालेको छ । ‘बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेकै राष्ट्रिय मुक्ति हो’ भन्ने मुल विचारसहित २ वर्षदेखि निरन्तर सबै नेपालीलाई नेपाली नै हुन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय झण्डामुनि रहेछ बौद्धिक संघर्ष राष्ट्रवादी केन्द्रले
मनाइयो २५६२ औँ बुद्ध जयन्ती
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्ध जयन्ती सोमबार देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ । २५६२ औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँको चावहिलस्थित चारुमति विहार र बौद्ध स्तुपामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । तस्बिरः रमेश दवाडी/अमरवाणी
मन्दिर जिर्णोद्धार नगरिंदा जोखिममा वृद्धाश्रम
महाभूकम्प गएको तीनवर्ष वितिसक्दा पनि पशुपतिस्थित समाज कल्याण वृद्धाश्रम परिसरमा रहेको पञ्चदेवलको मन्दिर जिर्णोद्धार हुन सकेको छैन् । पूर्ण रूपमा मन्दिरको क्षति पुगेकालेले जोखिम बढाएको छ । जसकारण वर्षायाममा मन्दिर ढल्न सक्ने सम्भावना छ । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
पशुपति वृद्धाश्रममा सोमबार नर्सहरूको ताली र गीतमा नाच्दै एक वृद्धा । वृद्धाश्रममा वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य जाँच गर्न नर्सहरू खटिएका छन् । फुर्सदको समयमा नर्सहरूले गीत बजाएर वृद्धवृद्धालाई मनोरञ्जन गराउँछन् । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
मनमोहक पलाँस फूल
काठमाडौँको कपनमा फुलेको मनमोहक पलाँस फूल । यो फूल वसन्त ऋतुमा फुल्छ । पृष्ठभूमिका कोइरालाको फूल । तस्बिर : रमेश दवाडी/अमरवाणी
वृद्धाश्रमका आमासँग खुसी साट्ने सन्तान भएनन् (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । मातातीर्थ औंसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । हिन्दु परम्परा अनुसार आजका दिन सबै सन्तानहरूले ममतामयी आमालाई सम्झिए । कतिले आमालाई भेटेरसँगै खुसी साटासाट गरे भने भेटन नभ्याउनेहरूले फोन स्काइपका माध्यमबाट भएपनि आमा प्रतिको स्नेह व्यक्त गरे । तर, पशुपतिस्थित वृद्धाश्रमका आमाहरूसँग भने
भक्तपुरमा सिन्दुर जात्राको रौनक
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि क्षेत्रका बासिन्दाले आइतबार विहान हर्षोल्लासका साथ सिन्दुरजात्रा अर्थात सुथःसिया जात्रा मनाएका छन्। जात्रामा केटाकेटीदेखी वृद्धवृद्धाको समेत सहभागिता रह्यो। बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमिमा मात्र मनाइने विभिन्न जात्रामध्ये ३२ वटा खटसहितको सिन्दुरेजात्रा प्रसिद्ध
फ्री वाइफाई सेवा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालमा फ्रि वाइफाई सेवा दिनेएको छ । नयाँ बानेश्वर, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ क्षेत्र, स्वयम्भु, बालाजु र शंखपार्कमा निःशुल्क वाइफाई सेवा सुरु भइसकेको छ । तस्बिर : अमरवाणी
तस्बिरमा हेर्नुहोस् पशुपतिमा सन्ध्या आरती
काठमाडौँँ। पशुपतिनाथ मन्दिर अगाडि दिनहुँ ६ बजेदेखि साढे सात सम्म सन्ध्या आरती हुनेगर्छ । आरतीको दर्शन गर्न दिनहूँ भक्तजनको भीड लाग्ने गर्दछ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत नभई पशुपतिनाथ सेवा समाजले दैनिक सन्ध्या आरती गर्ने गर्दछ । मूल मन्दिरमा विहाना र बेलुका छुट्टै आरती हुने गर्दछ । सन्ध्या आरतीका
विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत सम्पदाहरू अलपत्र
यो या त्यो नाउँमा सम्पदा दिनप्रतिदिन मासिदै छन् । भएका सम्पदाहरूको पनि उचित संरक्षण हुन सकेको छैन् । २०७२ सालको ‘गोरखा भूकम्प’ ले पुरातात्वहिक सम्पदामा असर पु¥यायो । पुननिर्माणले गति लिएको छैन् । सम्पदा हाम्रा सम्पत्ति हुन् । सम्पदा हाम्रा संस्कृति हुन् । सम्पदाको पुननिर्माणका क्रममा सरकारले
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रिसाएको बाँदर हेर्दै एक युवती । तस्बिर : अमरवाणी
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको बालमन्दिर मावि, मानसरोबर मावि र कोट मावि रोडिकोट परीक्षा केन्द्रका एसईईका परीक्षार्थी । हिमपातसँगै वढेको चिसोले परीक्षार्थीलाई समस्या भएको छ ।
बङ्लादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौंका लागि उडेको विमान त्रिभुवन विमानस्थलको रनवेमा दुर्घटनाग्रस्त क्षतविक्षत विमान । विमानमा ६७ जना यात्रु रहेको र ४ जना चालक दलका सदस्य विमानमा रहेका नागरिक उड्यन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ ।
अशोककुमार कोइराला स्मृति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेस सभापति देउवा
काठमाडौँ । नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आइतबार अशोककुमार कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा प्रथम पटक आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । सभापति देउवा र अशोेक कोइरालाकी ममतामयी माता नन्दकुमारी कोइरालाले ‘अशोक कोइराला
एउटै बोटमा दुइथरी फूलः
गोदवारीस्थित पुष्प विकास केन्द्रमा रहेका एउटा आरुको बोटमा फुलेका दुइथरी फूल । तस्विर/ नारायणी लामिछाने ।
बुद्धम शरणम् गच्छामीः
शनिबार टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ कार्यक्रममा सहभागी स्कुले विद्यार्थीहरु । कार्यक्रममा ७५ हजारभन्दा वढी मानिसको सहभागिता रहेको आयोजक विश्व किर्तिमानी परिषद्को दाबी छ । तस्विरःसुमन लामा
२५ तस्बिरमा हेर्नुहोस् उपत्यकामा 'होली'को रौनक
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा रङहरूको पर्व तथा फागुफूणिमा अर्थात् होली हर्सोल्सासका साथ मनाइएको छ । तराईका जिल्लाहरूमा भने फागुपूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ । काठमाडौँका वसन्तपुर, टुँडिखेल, ठमेल लगायतका ठाउँमा होलीको विशेष रौनक थियो । विभिन्न देशबाट आएका पर्यटकहरू पनि
‘भियू टावर’ मा रमाउँदै पर्यटक
नगरकोटमा अवस्थित ‘भियू टावर’ मा रमाउँदै आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक । टावरबाट रमणीय दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । तस्बिर : अमरवाणी
गुराँस बेचेर पढाई खर्चको जोहो
पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटमा लाली गुराँस बेच्च बसेका बालबालिका । कक्षा १ मा पढ्ने सदिक्षा शाह र कक्षा ४ मा पढ्ने प्रनिश शाहले गुराँस बेचेर कापिकलम किन्ने गरेको बताए । तस्बिर : अमरवाणी
वरिष्ठ संस्कृतिविद् जोशी सम्मानित
साहित्यकार पूर्णप्रकाश नेपाल ‘यात्री’ अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रले प्रदान गर्ने ‘यात्री वाङ्मय पुरस्कार ग्रहण गर्दै वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी । त्यस्तै यात्री विद्यापदकबाट शोधार्थी लक्ष्मी सुवेदीलाई सम्मान गरियो । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका
शिवरात्री तयारी तीव्र
शिवरात्रीको अवसर पारेर पशुपति क्षेत्रको राम मन्दिर नजिकै एक मन्दिरमा आइतबार रङरोगन गरिँदै । धार्मिक एवम् एोतिहासिक यस पर्वको हिन्दुधर्मावलम्बीमा विशेष महत्व छ । शिवरात्रीलाई लक्षित गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मान्दिरका साथै अन्य मन्दिरको पुनःनिर्माणका साथै मन्दिर रङरोगन गर्ने कार्यमा
हिँउको छानो !
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा हिँउ परेको छ । मौसम परिवर्तनसँगै हिँउ परेपछि जननीवन कष्टकर बनेको छ । तस्बिर : नरजन तामाङ/हुम्ला
चावहिल चोकमै भासियो टिप्पर
चावहिल चोकमा बा ४ ख ७२ ९३ नं को टिप्पर चक्का भासिएर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सवारी आवगम अवरुद्ध भएको छ । दिउँसो १ बजेतिर टिप्पर भासिएको ट्राफिक प्रहरीले बताए ।
रहिनन् संसारकै बूढी गुरिल्ला
संसारको सबैभन्दा जेठो महिला गोरिल्ला मरेको छ । सन् १९५७ मा कङ्गोमा जन्मिएको गुरिल्ला ६० वर्षमा मरेको बिबिसीले बताएको छ । क्यालिफोर्नियाको स्यान डिएगो चिडियाघर सफारी पार्कले शुक्रवार बूढी गुरिल्ला मेरेको हो । यो स्त्री गोरिल्लाले यसको पाँच पीढ़ी देखिन्। सफारी पार्कमा जनावरहरूको हेरचाह गर्ने पेगी
दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा आइतबारदेखि समिट एयरले दाङ–काठमाडौ उडान शुरु भएपछि विमानलाई स्वागत गर्न आएका स्थानीयवासी । तस्विर : बालाराम खड्का, दाङ, रासस